२५ सय व्यक्तिले मृत्युपछि अंग दान गर्ने | Sagarmatha TVSagarmatha TV २५ सय व्यक्तिले मृत्युपछि अंग दान गर्ने | Sagarmatha TV
मेनुका श्रेष्ठ । मृत्यु पश्चात मानिसका अंग जलाइने गाढ्ने धार्मिक परम्परा छ । तर, मृत्यु अगावै अंगदान गरेमा जीवन देखी आश मारिसकेका व्यक्तिले समेत पुनर्जीवन पाउछन । जलाएर वा गाढेर नष्ट गरिने शरीरमा भएका मंहत्वपूर्ण अंग दान गर्दा मृत्युको मुखमा पुगेका मानिसको जीवन बच्दैन मात्र गुमिसकेको खुशी समेत फर्किन्छ ।
सडक दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले मस्तिष्क मात्रै मृत्यु भएकाको मृगौला, फोक्सो, मुटु, पाचन थैली, सानो आन्द्रा, आँखा लगायतका महत्वपूर्ण अंग झिकेर २४ घण्टाभित्र अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका डा. कल्पना श्रेष्ठले बताए ।
एक व्यक्तिले आफ्नो खेर जाने अंग दान गरेमा ८ जना बिरामीले नयाँ जीवन पाउने डा. कल्पना श्रेष्ठले बताए ।तर सूचना र चेतनाको अभावमा अधिकांश व्यक्तिहरुमा अंगदान सम्बन्धि भ्रम पाइन्छन । धार्मिक संस्कार अनुसार राम्ररी सत्गती नगरिदा पितृ दोष लाग्ने ठानिदा समेत अंगदान गर्न अनिच्छुक हुने गरेको बताइन्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार नेपालमा बार्षिक ३ हजार व्यक्तिको मृगौला, १ हजार व्यक्तिको कलेजो सहित विभिन्न अंग प्रत्यारोपण भए सयौंको ज्यान जोगिन सक्छ । तर सो अनुरुपको अंग उपलब्ध नहुँदा सयौंको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउछन ।
कानुनी प्रावधान भएयता ३ वटा मृत मस्तिष्कबाट ६ जनामा मृगौला प्रत्यारोपण र एक जनामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । त्यस्तै करिब २५ सय नागरिकले अंगदानको इच्छा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसले आम मानिसमा सूचना त पुग्नेनै छ चेतना समेत अभिबृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । तर मृत्युपछिको एक जनाको अंगदानले सात जनासम्मको जीवन जोगिने सूचना ब्यापक गराउन सके अंगदानप्रति आम मानिसको चाहाना अझ बृद्धि हुने देखिन्छ ।